‘आर्शिवाद’ पछि रामकृष्णले किन गरेनन् फिल्म ? - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘आर्शिवाद’ पछि रामकृष्णले किन गरेनन् फिल्म ?
सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित थुप्रै गायकहरुले नेपाली फिल्ममा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । मुरलीधर, यम बराल, राजेशपायल राई, बाबु बोगटी, यश कुमार, निमा रुम्बालगायत धेरै गायकहरु फिल्मको हिरो भए । तर, कुनै गायकलाई फिल्म अभिनय फापेन । प्रायःले पहिलो फिल्मपछि दोस्रो फिल्ममा काम गरेका छैनन् । यद्यपि, फिल्मप्रति गायकहरुको आकर्षण घटेको भने छैन ।
एक समय सांगीतिक क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेका गायक रामकृष्ण ढकालले पनि फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । उनको डेब्यू फिल्म थियो, ‘आर्शिवाद’ । जसमा अभिनेता राजेश हमाल प्रमुख भूमिकामा थिए । यो फिल्म रामकृष्णको जीवनमा आधारित थियो । उनले बाल्यकालमा गर्नुपरेको संघर्षलाई पर्दामा उतारिएको थियो । यसकारण फिल्ममा उनी आफैंले अभिनय गरेका थिए ।
यो फिल्म बक्सअफिसमा औसत चलेको थियो । मोफसलमा फिल्म प्रदर्शन भएको एक हप्तामा दरबार हत्याकाण्ड र राजधानीमा प्रदर्शन हुने समयमा देशमा आपत्तकालिन समय लागू भएको थियो । जसले गर्दा फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सकेन । यो फिल्मपछि रामकृष्णले दोस्रो फिल्म गरेनन् । कतिपयले पहिलो फिल्म नचलेपछि उनले अभिनयबाट सन्यास लिएको टिप्पणी समेत गरे ।
तर, गायक ढकाल आफूले दुईटा डुंगामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्न नखोजेको बताउँछन् । ‘आर्शिवाद’ पछि फिल्म नगर्नुको कारणबारे उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘मैले फिल्ममा अभिनय गर्छु भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ । तर, मेरो संघर्षको कथामा फिल्म बन्ने कुरा आएपछि म तयार भएको थिएँ । फिल्म निर्माणको क्रममा धेरै पटक रोकियो । त्यसपछि बजेट पनि निकै बढ्यो ।’
उनले थपेका छन्, ‘फिल्म मोफसलमा चलेको एक हप्तापछि दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजधानीमा चल्ने बेलामा आपत्तकालिन लाग्यो । त्यो हुँँदाहुँदै पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको थियो । त्यसबेलाको हिट फिल्म नै हो ।’ यो फिल्मपछि आफूलाई थुप्रै फिल्मबाट अफर आएको उनी सम्झन्छन् । तर, संगीतमा समय दिनका लागि फिल्ममा काम नगरेको उनको भनाई छ ।
‘आर्शिवाद’ को सुटिङ र प्रमोसनका लागि एक वर्षसम्म दौडिँदा गायन पेशालाई असर परेको सम्झँदै रामकृष्णले भनेका छन्, ‘दुईटा डुंगामा खुट्टा राखेपछि डुब्छ भनिन्छ । यसैले मलाई त्यो फिल्म हिट नै हुनु थियो । र, भयो पनि । त्यसपछि अर्को फिल्म गर्न मलाई चुनौती थियो । दोस्रो फिल्म चलेन भने म्यूजिक करिअरलाई असर गर्छ भन्ने ठानेर फिल्म अभिनयबाट टाढा नै बसेँ ।’
उनी पहिलो फिल्ममा राजेश हमालसँग काम गर्न पाउनुलाई आफ्नो सौभाग्य ठान्छन् । ‘आर्शिवाद’ पछि अभिनयबाट टाढा रहेका उनले फिल्मका गीतमा भने आवाज दिइरहेका हुन्छन् । उनको स्वरमा रहेको फिल्म ‘हिजो आजका कुरा’ को ‘माया जदौ’ गीत अहिले चर्चामा छ । ‘रमाइलो घमाइलो’, ‘पिरतीले रोपेको विरुवा’ लगायत थुप्रै फिल्मका गीतमा उनले आफ्नो स्वर भरेका छन् ।
Prevम आफ्नो चरित्रलाई कहिल्यै घर लिएर जान्नँ : आयुष्मान खुराना
Nextबाढीबाट कैलाली जलमग्न